Iminyaka engu-15 kanye nangaphezu kwezigidi ezingu-270 zamaRandi sibonga ukuhlanganiswa kwayo ne (RED) | Ngivela ku-mac
Iminyaka engu-15 kanye nezigidi ezingaphezu kuka-270 zamaRandi ngenxa yokuhlanganiswa kwayo ne-(RED)
I-Apple yinkampani yezobuchwepheshe. Sonke siyakwazi lokho. Okungephikwe futhi wukuthi iyinkampani efuna ukudlulela phambili futhi lokhu kubonakaliswa yizibopho zayo ezahlukene. Ufuna ukungathathi hlangothi Ukukhishwa kwekhabhoni ngo-2030. Imibandela yesikhathi esizayo eminyakeni engu-10 ezayo, kodwa akuzona zonke izithembiso. Khumbula ukuthi usuvele unolwazi olufanayo lokuqulwa kwecala. Ungathathi lutho futhi ungenzi okuncane Iminyaka engu-15 esiza abanye ngeminikelo yemali ngezikhathi ezithile ukuze kusizwe ucwaningo lokuzama ukuqeda ingculaza, ikakhulukazi e-Afrika. Futhi kulelo zwekazi lapho isaqhubeka nokuphenduka manje njengenkampani enobhubhane olukhiqizwe yi-COVID-19.
U-Apple usesebenzisana nenhlangano (RED) iminyaka eyishumi nanhlanu ukuze kutholwe isixazululo kulesi sihlava esiyingculazi. Ikakhulukazi emazweni adinga kakhulu. Imali eqoqwa yi-Apple ngokudayiswa kwemikhiqizo ebomvu, ihloselwe ucwaningo lokuqedwa kwalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, phakathi kuka-2020, 2021 kanye no-2022 imali yabelwa ukudambisa imiphumela emibi hhayi impilo kuphela kodwa nezomnotho nezenhlalo idale ubhubhane lweCoronavirus emhlabeni jikelele kodwa ikakhulukazi ezwenikazi i-Afrika.
Eqinisweni, i-Apple izoqhubeka nokufaka isandla ekukhuluphaliseni leso sikhwama ngokumelene nalolu bhubhane ngokusaba 50% wenzuzo ezitholakala ngokuthengiswa kwalezo imikhiqizo ekhethiwe.
Kuze kube manje, bakwazile ukuqoqa imali ecela ku-270 million dollars ngakho-ke inhlangano (RED) kanye ne-Apple babefuna ukugubha leyo nyunyana ndawonye ngevidiyo elayishiwe esiteshini se-YouTube senhlangano.
(RED) kanye ne-Apple banomlando owabelana ngawo emzabalazweni wokuqeda i-HIV/AIDS. Njengozakwethu (RED) iminyaka engu-15, i-Apple iqoqe cishe izigidi ezingu-270 zamaRandi we-Global Fund ngokuthengisa (UMkhiqizo) amadivayisi OKUBOMVU nezinye izinto. Njengoba i-COVID isongela ukuhlehlisa inqubekelaphambili eseyenziwe kuze kube manje ekulweni nengculazi, i-Apple ibilokhu ibandakanya amakhasimende ayo ekulweni nalezi zifo eziwubhadane unyaka wonke nangezikhathi ezibalulekile kulo lonke izwe. I-App Store, ukuhlanganiswa kwe-Apple Pay, nokuzibandakanya kwabasebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Iminyaka engu-15 kanye nezigidi ezingaphezu kuka-270 zamaRandi ngenxa yokuhlanganiswa kwayo ne-(RED)
UJeff Wilcox, obhekele ukushintshela ku-Apple Silicon, uya ku-Intel
Izibuko ze-Apple ze-AR zizophatha ama-Pancake lens ngokusho komhlaziyi u-Kuo